Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa attends a meeting with civil society organisations on 22 August 2020 at the State House in Bulawayo, Zimbabwe. Photo: AFP/ZINYANGE AUNTONY
“The ANC delegation must meet with all the key stakeholders in Zimbabwe otherwise we are wasting time. They must meet the MDCA, they must meet the key civil society groups, the must meet with journalists who have been victimized by ZANU PF.”
Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa has since vowed to “flush out” the “bad apples” attempting to “divide our people” – stoking concern among social activists and opposition figures already targeted by the regime.
Zimbabwe’s ruling ZANU-PF party on Tuesday said that the second delegation would arrive “today” and meet its officials on Wednesday “to discuss issues of mutual interest”.
“We are also aware that this visit is taking place against the backdrop of false claims of a nation in crisis,” the party added in a statement, echoing the government’s repeated attempts to downplay the situation.
@PresidencyZA you are such a joke .zanu pf will never change .Your idiotic marriage with zanu pf will only worsen things in Zim .ZANU PF is not Zimbabwe and ANC is not South Africa simple….